ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေး
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေး
Posted by ကိုပါကြီး on Aug 12, 2012 in Buddhism, Politics, Issues | 11 comments
(Aung Kyaw Moရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှ ဖော်ပြချက်ကို ဂေးဇတ်
အဖွဲ့သားများအတွက် ထပ်ဆင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ပင်ကိုယ်ရေး မဟုတ်ပါ။)
တင်နိုင်လင်း ဆိုတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်က မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုမေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်။
ဘာသာ community အနေနဲ့..လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်..(Buddha ,Dama Value
သူ့မေးခွန်းက လေးနက်ကျယ်ပြန့်လွန်းတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ အသိဗဟုသုတက အလွန်နည်းပါးသေးငယ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကြီးကို အတိအကျ ဖြေနိုင်မဲ့ စွမ်းအား မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ မိမိ ဘာသာတရားနဲ့ အခြားသော ဘာသာကြီးများရဲ့ လူမှုရေး အကျိုးရောက်မှုတွေကို နိုင်းချိန် ကြည့်ခဲ့ဖူးတော့ စဉ်းစားထားတာလေးတွေတော့ရှိတယ်။
အမှား အမှန်ဆိုတာ ကတော့ ကိုယ့်ရှုဒေါင့်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်။
ဒီမေးခွန်း ဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ အခြေခံ အကြောင်းတရားက ၂ ခု ရှိတယ်လို့ မြင်တယ်။
ပထမ အကြောင်းတရားက အခု ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ဆဲဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမို ကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုပဲ ဖြစ်တယ်။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက် ရှင်သန်ခဲ့တယ်ဆိုရာမှာ ပဒေသရာဇ်မင်းတွေရဲ့ အာဏာစက် အကာအကွယ်နဲ့ ရှင်သန်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ဗဟိုဦးစီးမှု နိုင်ငံရေးစံနစ်တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှု နဲ့ ရှင်သန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု ပြည့်ပြည့်၀၀ ဖြစ်သွားခဲ့ရင် အာဏာစက်ဟာ ဘာသာရေးအရ ဘက်လိုက်လို့ မရတော့တဲ့ အနေအထားမှာ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။
ဒီအခါမှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ အပါအ၀င် အခြားသော ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေနဲ့ တန်းတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီးယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီအခါ မှာ အရိုးစွဲ ပြီး အပေါ်စီးကပဲ နေခဲ့ ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံအခင်းအကျင်းသစ်မှာ လုပ်နိုင်ပါမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာတာ မဆန်းဘူးလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်တယ်။
တောင်ကိုးရီးယားမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်သွားတာနဲ့ အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ဖြည်းဖြည်း အားနည်းချိနဲ့သွားတာကို ဥပမာ အဖြစ်ကြည့်လို့ရတယ်။
ဒုတိယ အကြောင်းတရားကတော့ အခု လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းကြောင့်ပါပဲ။ အဖြစ်အပျက်က စတင်တဲ့ အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာအကြား ရန်တိုက်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ စတင်ခဲ့ပေမဲ့ အနာဟောင်းရှိပြီးသား ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြဿနာ မီးတောက်က ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါပဲ။ ဒီ ဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ အမြင်အမျိုးမျိုး ရှုထောင့် အမျိုးမျိုး ရှိနေတာကို တွေ့ရတဲ့အပြင် ပညာရှင်တွေကလဲ ရာဇ၀င်အူပေါက် အခြေအတင်ပြောလာကြတာတွေ နားမဆန့်အောင် ကြားလာရပြန်တယ်။
အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခု တည်ဆဲ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့ အမြင်ရပ်တည်ချက်တွေက ဖြောင့်ဖြောင့် ဆန့်ကျင်နေတာကို တွေ့ရတော့ ပြဿနာက ပိုမိုနက်ရှိုင်းလို့ အမယ်ဘုတ်ချည်ခင် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။
တစ်ချို့လဲ လူမိုက်ဆန်ဆန် ချကွ သတ်ကွ ပင်လယ်ထဲ မျောလိုက်ကွ တစ်ခြားနိုင်ငံမောင်းထုတ်လိုက်ကွ ဆိုတာမျိုးတွေ အော်ဟစ်နေကြတယ်။ ကမ္ဘာ ဇာတ်ခုံပေါ်က နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ နယ်နမိတ်ပြဿနာတွေဟာ ၀ဲ နှင်းခူတွေ လို ပျောက်ခဲတယ်ဆိုတာ မသိကြရောထင်တယ်။
ကက်ရှမီးယား ပါလက်စတိုင်း နဲ့ ဂါဆာ ကမ်းမြောင်ဒေသ စပရက်စလီကျွန်း အရေးအခင်းတွေက စလို့ ပြဿနာတွေ က သပွတ်အူလိုက် ပြီး အဖက်ဖက်က ပွေလိမ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တယ်။ အခု မြန်မာပြည်က ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဟာလည်း အတူတူပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွား အနာရင်း ပြည်တည်နေခဲ့တဲ့ အိုင်းအမာကြီး ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ အုပ်စိုးသူ အဆက်ဆက်ကလဲ ဒီ ကိစ္စကို ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုင်တွယ်ခဲ့ ကြတယ် အထူအပါး အမျိုးမျိုးနဲ့ ကစားခဲ့ကြတယ်။ တစ်သမတ်တည်း ညီညွတ်တဲ့ ရပ်တည်ချက် မရှိခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။ အာဏာရှင် အဆက်ဆက်ကလဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိပဲ အိမ်နောက်ဖေးက မီးကို ကြိတ် ငြိမ်းခဲ့ ကြတော့ အခု လို မီးသတ်ကားခေါ်ရမဲ့ အခြေဆိုက်မှ ဆိုတော့ အများကြီး ဆိုးဝါးခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်။
ပြဿနာကို ပိုဆိုးစေတာက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်နေတဲ့အချက်ပဲ။ ဒီကိစ္စကိုတော့ အသေးစိတ် မဆွေးနွေးချင်တော့ဘူး။ အများကြီး ပြောထားကြပြီးလို့ပါပဲ။ ရခိုင်မှာရော ပြည်မမှာပါ နှစ်သန်း အထက် ရှိနေတဲ့ လူစုလူဝေးကြီး တစ်ခုကို ရိုဟင်ဂျာခေါ်ခေါ် ခေါ်တော ခေါ်ခေါ် စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီ ခေါ်ခေါ် ကြိုက်သလိုခေါ် မျက်လှည့်ပြသလို ဟပ်ချလောင်းဆို ဖျောက်ပစ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဂျူး ၆ သန်း ကို သတ်ခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာတောင် မအောင်မြင်ခဲ့တာကို သင်ခန်းစာယူကြရမယ်။
ဒီနေ့ခေတ်လို လူသား အခွင့်အရေးတွေ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်ဟစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တောင် ပိုဆိုးတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး လူသားအခြေခံ အခွင့်အရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှု အနာဂတ် စတဲ့ သုံးပင်လိမ်နေတဲ့ ကြိုးကြီး ဖြစ်တယ်။ သိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီး နှလုံးရည်နဲ့ ကိုင်တွယ်ရမဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့က မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာလွမ်းမိုးလာမှာကို တိတ်တိတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ်တင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာ အမှန်ပဲ။ အစ္စလာမ် ဘာသာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ယခင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ နေရာတွေ အသွင်းပြောင်းကုန်တာတွေကို ထောက်ပြီး ဒီလို စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတာပဲ ဖြစ်တယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန် ပါကစ္စတန် အိန္ဒိယနဲ့ အာရှ အလယ်ပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ နောက်ပြီး မလ္လာယုနဲ့ ဆူမာတြား ဂျာဗား စတဲ့ ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ဒေသတွေမှာ အစ္စလာမ် အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့ရတာကို ထောက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေက ပိုကြီးထွားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ စိုးရိမ်စိုးရိမ် အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေက မြန်မာပြည်မှာ ပိုလို့ တိုးတက် ထွန်းကားလာမဲ့ အရိပ်နမိတ်တွေကို မြင်နေရသလို တရုပ်-မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ အားကောင်းလာနိုင်မဲ့ အရိပ်အခြေတွေကိုလဲ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ် တစ်လျှောက်လုံးမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ခရစ်ယာန်ဘာသာအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ကြသလို ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းမှာရော ဘာတွေ ဖြစ်လာဦးမှာလဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားကြရမလဲ။ ဒါက ညီလေး တင်နိုင်လင်း မေးတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဥာဏ်မီ သလောက် စဉ်းစားပြီး သူ့ကို အခုလို ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ (တစ်ချို့ အပိုင်းတွေကို တော့ နည်းနည်းထပ် မွမ်းမံထားပါတယ်။)
ညီလေး တင်နိုင်လင်း ရေ..
အကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပါ။ ညီလေး မေးတဲ့ မေးခွန်းကို အကို ဆွေးနွေးချင်တာ ကြာပါပြီ။ မေးတဲ့သူလဲ မရှိသလို မမေးပဲပြောရင်လဲ ၀ိုင်းဆဲမဲ့သူ ပဲ များတာလေ။ သာသနာတော်ကြီးက နေလို လလို ထိန်ထိန်တောက် နေတယ်လို့ ထင်နေကြသူတွေပဲ များတာမဟုတ်လား။
အကို့ အမြင်တော့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အနေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ အခြား ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီး ၂ ခု ဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်နဲ့ အစ္စလာမ်တို့နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြိုင်ဆိုင်ရတော့မဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ အရင် အာဏာရှင်ခေတ် အဆက်ဆက်ကတော့ ဘာသာရေးကို အသုံးချခဲ့လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အကျောပေးခံရခဲ့တာလေ..ကျန်ဘာသာကြီးတွေကို နှိမ်ထားခဲ့တာလေ။
အခု ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ ခေတ်သစ်ကို ရောက်ရင် တန်းတူနီးပါးပြိုင်ကြရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှင်သန်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ အတွေး အခေါ်တွေ အသိအမြင်တွေ တန်ဖိုးတွေ အားလုံးပြောင်းမှပဲ ရမယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှိတာတွေ ဘာတွေအားနည်းနေလဲ အရင်ကြည့်ရအောင်။
၁။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အပျက်ရှုလောကအမြင် ဘ၀အမြင်တွေ ကြီးစိုး နေတယ်။ တည်ဆောက်မှုပိုင်းမှာ အားနည်းနေတယ်။
၂။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တွေ အရမ်းများလွန်းနေတယ်။ လက်တွေ့မဆန်အောင်ဖြစ်ရတယ်။ အံ့ဘနန်း စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားမှုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ဘယ်သူမှ မမီနိုင်ဘူးလို့တောင် ပြောရမလို ဖြစ်တယ်။
၃။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လောကုတ္တရာကို လွန်လွန်ကဲကဲ ရှေ့တန်းတင်လွန်းနေတယ်။ လောကီဘ၀ တန်ဖိုးတွေ မှေးမှိန်နေတယ်။ လောကီဘ၀ ကို တစ်ဆင့်နိမ့်တဲက ဘ၀ အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ မတတ်သာလို့ လက်ခံထားရပေမဲ့ စွန့်ပယ်ပစ်အပ်တဲ့ အရာလို့ မြင်တယ်။
၄။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ပုဂ္ဂလိက ဆန်လွန်းပြီး လူမှုရေးဘ၀ကို အသားမပေးလှဘူး။ တစ်ကိုယ်တော်ဝါဒ ကြီးစိုးနေတယ်။ ဘာသာရေး လုပ်ဆောင်မှု တွေဟာ အတ္တကို ဗဟိုပြုနေပါတယ်။ လှူရင်တောင် ကိုယ်ကုသိုလ်ရဖို့ လှူတယ်ဆိုမျိုး ကို အသားပေးလွန်းတယ်။
၅။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို ဖြုန်းတီးနေတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် တန်ဖိုးရှိအောင် အသုံးမချနိုင်ဘူး။ စိတ်ကူးယဉ် ဘုံဗိမာန်တွေရဲ့ တွင်းနက်ကြီးထဲ စုပ်မြိုခံနေရတယ်။
၆။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မှားယွင်းတဲ့ အတိတ်ကံပုံချဝါဒကို ယုံကြည်လွန်းတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကံ အပေါ်မှာ အားပြုမှုနည်းပါးတယ်။ တရားနဲ့ ဖြေလိုက်ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လက်တွေ့ပြဿနာတွေကို ရင်မဆိုင်ပဲ ရှောင်ပြေးဖို့ အသုံးချတဲ့ ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တယ်။
၇။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်တည်ဆောက်မှု မရှိပဲ အစိတ်စိတ်ကွဲပြားနေတယ်။
၈။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနတွေနဲ့ အလှမ်းဝေး နေတယ်။ တရားသေ၀ါဒကို ဆုပ်ကိုင်လွန်းတယ်။ ဆရာဘုန်းကြီးပြောသမျှ မျက်စိမှိတ်ယုံတဲ့ဝါဒကိုပဲ လက်ကိုင်ထားတယ်။
၉။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကမ္ဘာ နိုင်ငံရေး အမြင်မွဲပြီး သီးခြားတံခါးပိတ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းတူရင်တောင် ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမှ ပို စစ်မှန်တယ်ထင်တယ်။
၁၀။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အောက်ခြေအဆင့်အထိ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ အားနည်းနေတယ်။ ဆွမ်းလောင်းအသင်းတွေ လောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါ။
ဒီ အားနည်းချက်တွေကို ပြင်ကြဖို့လိုတယ်။ ဒါတွေ ပြင်နိုင်ရင်တော့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အားကောင်းမောင်းသန် ဖြစ်လာမှာ အမှန်ပဲ။
တစ်ချက်ခြင်းစီကို ပြောမယ်ဆိုရင်တောင် အကြာကြီးပြောရမယ်။ ပြောစရာတွေက များတယ်။ ချုပ်ပြောရရင် တော့ ဘုရားလက်ထက်က ရှေးဦး ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးက အလုပ်မဖြစ်တော့တာ အမှန်ပဲ။ ဓမ္မရဲ့ အနှစ်သာရက မပြောင်းလဲပေမဲ့ ဓမ္မကို ဖေါ်ဆောင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကို ပြောင်းပစ်ဖို့ လိုတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားဖို့ အချိန်က မဝေးတော့ဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ အကို့ စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံဖေါ်ထားတာလေးကို ပြောမယ်။
၁။ တစ်ဖက်စောင်းနင်း ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီကို ပြန်တည့်မတ်ပေးမဲ့ စာတွေ ပေတွေ ထွက်ပေါ်ဖို့ လိုတယ်။ လောကီတန်ဖိုးတွေ လူမှုရေးဘ၀တန်ဖိုးတွေ သုတေသနပညာတန်ဖိုးတွေ လက်တွေ့ကျတဲ့ သိပ္ပံအမြင်တန်ဖိုးတွေ ပစ္စုပ္ပန်ကံ တန်ဖိုးတွေကို အလေးပေးတဲ့ စာပေတွေကို ဓမ္မ အနှစ်သာရနဲ့အညီ ရေးသားကြဖို့ လိုတယ်။ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြရမယ်။
၂။ ပွယောင်းယောင်း ဖြစ်နေတဲ့ သံဃာထု ကြီးကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ပြန်ဖွဲ့ရမယ်။ ၀ိနည်းနဲ့အညီ နေထိုင်ပြီး ပရိယတ် ပဋိပတ် တကယ် မလုပ်တဲ့ သံဃာတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရမယ်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို မှန်ကန်အောင် အသုံးချနိုင်ရမယ်။ စစ်မှန်တဲ့ သမုတိသံဃာဟာ သာသနာရဲ့ အသက်သွေးကြောပဲ ဖြစ်တယ်။ ရတနာပဲ ဖြစ်တယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာဆိုတာ နည်းနည်းပဲ ရှိသင့်တယ်။
၃။ သာသနာ့ဝန်ဆောင်မဲ့ ပညာတတ် ကျမ်းဂန်တတ် ဥပသကာ အလွှာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရမယ်။ Pastors Chaplains တွေလို သာသနာအမှုကို ဆောင်ကြရမယ်။ လူတွေရဲ့ သာရေးနာရေးတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ရမယ်။ ရဟန်းတော်တွေက ၀ိနည်းနဲ့ အညီသာသနာ တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းနေချိန်မှာ ရဟန်းတွေ လက်ထဲက Social Leader Role ကို တာဝန်ယူကြရမယ်။
၄။ လှူဒါန်းကြတဲ့ Material Resources တွေကို လက်တွေ့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့ သာသနာ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ ဘာသာဝင်အချင်းချင်း စောင့်ရှောက်ကူညီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချရမယ်။
၅။ ယုံကြည်မှု အခြေပြုတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ထောင်ကြရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ လောကီဘ၀ တိုးတက်သာယာရေးတွေ လုပ်ဆောင်ကြရမယ်။ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို ဖြန့်ဝေကြရမယ်။
၆။ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ ဓမ္မ အင်စတီကျူးရှင်းတွေ သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကို အားပေးကြရမယ်။ သာသနာပြု နည်းဗျူဟာတွေလေ့လာကြရမယ်။ ခေတ်နဲ့ အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တာတွေ ကို ပြုပြင် ကြရမယ်။ ဘာသာရေးဟာ မံမီရုပ် ဆေးစိမ်သလို ထိန်းသိမ်းဖို့ သက်သက် မဟုတ်ပဲ အမြဲလန်းဆတ်ရှင်သန်နေတဲ့ အရာ ဖြစ်နေသင့်တယ်။
ရ။ အများ အကျိုးရှေ့ရှုတဲ့ဝါဒ တစ်ကိုယ်ကောင်းအကျိုးစွန့်လွှတ်တဲ့ အယူအဆတွေကို အားပေးကြရမယ်။ ဗောဓိသတ္တလမ်းစဉ်ကို အားပေးရမယ်။ ဗြဟ္မစိုရ်ဝါဒကို ထွန်းကားစေရမယ်။
၈။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွင်း ညီညွတ်မှုအတွက် သဘောထားကြီးမှုနဲ့ တည်ဆောက်ကြရမယ်။ ခွဲခြားဖယ်ထုတ်တဲ့နည်းတဲ့ ပေါင်းစည်းညှိနိုင်းယူတဲ့နည်းကို သုံးကြရမယ်။ ဘယ်လောက် အစွန်းရောက်လွန်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစုအမက်ကို မဆို အကျိုးရှိအောင် ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အခြေခံနဲ့ ပူးပေါင်းကြရမယ်။
၉။ ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလောကနဲ့ ပိုပြီး ဆက်သွယ်ရမယ်.။ အထီးကျန် တံခါးပိတ်ဝါဒပိုကို ရှောင်ရှားရမယ်။
၁၀။ နိုင်ငံရေး အမြင် စီးပွားရေး အမြင်တွေနဲ့ ဘာသာရေးကို ဆက်စပ်နိုင်ရမယ်။ မိမိ လူမျို ရဲ့ စီးပွားရေးနိုင်ငံရေး မတိုးတက်ရင် ဘာသာရေးလဲ ကျဆုံးမှာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ခြား ဘာသာကြီးတွေဆီက သင်ယူလေ့လာသင့်တာတွေ အတုယူသင့်တာတွေ ကိုလဲ ရှာဖွေပြီး အတုယူဆောင်ရွက်ကြရမယ် (၀ိုင်အမ်စီအေကို အတုယူပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီအေ ဖြစ်လာသလိုမျိုး)
အဲဒါတွေကတော့ အကို့ အမြင် အကျဉ်းချုပ်ပါပဲ ညီလေး။ . . . .
စတဲ့ဆွေးနွေးချက်များဖြင့် အနာဂတ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအရေးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့် ဆင်ခြင်သင့် ပြင်ဆင်သင့်သည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ကြောင်း ထပ်ဆင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ချုပ်ပြောရရင် တော့ ဘုရားလက်ထက်က ရှေးဦး ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးက အလုပ်မဖြစ်တော့တာ အမှန်ပဲ။ ဓမ္မရဲ့ အနှစ်သာရက မပြောင်းလဲပေမဲ့ ဓမ္မကို ဖေါ်ဆောင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကို ပြောင်းပစ်ဖို့ လိုတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားဖို့ အချိန်က မဝေးတော့ဘူးလို့ ဆိုရမယ်။
မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို.. ဘုရားလက်ထက်က ရှေးဦး ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ယူဆထားပုံပေါ်နေပါတယ်..
“The end justifies the means” တဲ့..
သွာက္ခာတော၊ ဘဂ၀တာဓမ္မော၊ သိန္ဒိဋ္ဌိကော၊ အကာလိကော၊
ဧဟိပသိ၁ကော၊ သြပါနေယျိကော၊ ပစ္စတ္တံဝေဒိတဗ္ဗော၊ ၀ိညူဟိ။
၁.)သွာက္ခာတော-အစအလယ်ဆုံး၊ သုံးပါးအစုံကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံ
အဆုံးသတ်မှာ… အဆုံးအဖြတ်ဟာ.. (လောကီ၊လောကုတ္တရာမှာ) မအောင်မြင်ဆင်းရဲခြင်းပြနေခဲ့ရင်..အဲဒီတရားဟာ..တရားစစ်တရားမှန်မဟုတ်ပါဘူး…
ဂုဏ်တော်နဲ့မညီရင်.. အဲဒီဓမ္မဟာ.. ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့.. ဓမ္မအစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူး..
ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကစတွက်ရင်.. နှစ်၁၀၀၀ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြီ..
ရွာသူားများ.. မူရင်းရေးသူဖိတ်ခေါ်ပြီး.. Brainstorming လုပ်သင့်ကြောင်း..
ကျုပ်အနေနဲ့လည်း.. ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း..တပိုဒ်၊တကွက်ချင်း.. ဆွေးနွေးလိုပါကြောင်း..
တော်တော်များများကတော့.. မူရင်းစာရေးသူကို.. မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်လို့.. စွတ်စွဲကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်း..
ငါနဲ့မတူငါ့ရန်သူ..။ သတ်မယ်ဖြတ်မယ်..ပါးပါးလှီးမယ်..။ထောင်ချမယ်..။ ပါလာနိုင်ကြောင်း..
(တကယ်လည်း)တကယ့်လက်တွေ့လည်း.. မိုးပြာဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်ရဟန်းကို.. မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှ ထောင်နှစ်ရှည်ချထားကြောင်း..
kan nyein mg says:
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်အားအများဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆ၊ လက်ခံကျင့်သုံးချက်တို့သည် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေမှာဖြစ်ပြီး၊ မှန်ကန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အဟန့်အတားများစွာ တွေ့ရမှာ လုံးဝ အသေအချာပါ။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြည်သူအများဆုံး ဘာသာရေးအမြင်ထည့်၍ပြောသော စကားတို့တွင် အားမရှိ၊ အနာဂတ်မရှိသော စကားများသာ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
(၁) ဒီလူကြီး(ခန္ဓာ) ရှိနေသ၍ ဆင်းရဲမှုကတော့ရှိနေမှာဘဲ။
(၂) မမွေးမီအတိတ်က ဆင်းရဲကံပါနေသ၍တော့ ဆင်းရဲနေအုံးမှာပဲ။ နောက်ဘ၀မဆင်းရဲအောင် မရှိ၊ ရှိတာကို လှူရမှာဘဲ။
(၃) ကိုယ်လှူတာမှာ ကိုယ့်စိတ်သာအဓိက အလှူခံသူက ဘာလုပ်လုပ်၊ ကိုယ်လှူတာ ကိုယ်ရမှာ။
မသေချာမှု၊ မရေရာမှု ပေါင်းများစွာ ဖြင့် ကျင့်သုံးလိုက်နာ တည်ဆောက်နေသော ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်းရာထောင်မကကြာပါပြီ။
တခြား အချက်တွေကတော့ ငြင်းစရာ မရှိလောက်အောင်ပါပဲ ။
သို့ သော် ……..ဒီ အချက်ကတော့ အငြင်းပွားချင်စရာပဲ ။
“….အံ့ဘနန်း စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားမှုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ဘယ်သူမှ
မမီနိုင်ဘူးလို့တောင် ပြောရမလို ဖြစ်တယ်။…..”
Brainstorming….ဆိုတဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခေါင်းခြင်းရိုက် အဖြေရှာနည်းဆိုခြင်းကလည်း
ခက်ခဲတဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲထွက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဆရာတော် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မြန်မာဘုန်းကြီးလူထွက် ဓမ္မာစရိယကျော်
တွေရဲ့ …ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံကိုကြည့်ရင် အင်မတန်မှကို ကြောက်စရာကောင်းလောက်သော်လည်း
၂။ အစိုးရပိုင်းက ဘေးမဖြစ်အောင် တာဝန်ယူစောင့်ကြည့်ပေးခြင်း။
၃။ အေးချမ်းတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ အနိုင်ဖြစ်သူက မမောက်မာ၊ ရှုံးရသူမှာလည်း ဝန်တိုမဖြစ်ကြခြင်း။
အဲ့သလိုသာဆိုလျှင်တော့…..ဗုဒ္ဓဒဿနများဟာ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း လွှမ်းခြုံမိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင်း……
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ အသိအမြင်တွေပြောင်းပြီး တရှိန်းထိုး တိုးတက်သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာ ယနေ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေးတွေကို နှစ် ၂၅၀၀-ကျော်က နည်းဗျူဟာတွေအတိုင်းပဲ လှေနံဓါးထစ်
ဖော်ဆောင်နေကြဦးမယ်ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်ကာလတွေမှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာပဲ မှတ်တမ်းကျန်ခဲ့ရပါတော့မယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မများကတော့ တန်ဘိုးအမှန်သိပြီး အသုံးချတတ်သော လူမျိုးများဆီသို့ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိပါသည်။
အဲဒါစကားကမှန်တယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာသနာ အကျိုးကို မဆောင်ရွက်နိုင်ပဲ စားပေါက်ချောင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ သူတွေကို သံဃာစာရင်းကနေဖယ်ထုတ်ရမယ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်က အဲဒီမှာတင် ပျောက်နေတယ် မန်းလေး မှာဆို ရှက်ကီ ထုတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေတောင်မြင်ဖူးတယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ပညာတတ်ဘုန်းကြီးတွေကိုပဲထားပြီး ဒုလ်လဘ ဝတ်တဲ့သူတွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ပဲဝတ်ခွင့်ပေးရမယ်အဲဒါမှ ဘာသာကသန့်သွားမယ် စားပေါက်ချောင်ချင်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သူတွေရှိနေရင်တော့ဘာသာပျက်မှာပဲ နောက်ပြီးဘားလမ်းထဲကဟိနဒူ ဆိုင်မှာ ရေခဲသေတာ ဝယ်တုန်းကဆို ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဝင်လာပြီး ဟေ့ကောင်ငါ့ကိုဆေးလိပ်တိုက်ပြီး၅၀၀လောက်ပေးစမ်းလို့ပြောတာတွေ့ဖူးတယ်အဲဒါကို ကျွန်တော်က သင်္ကန်းကိုအားနာလို့ စောက်ခွက်မရိုက်ချင်ဘူးထွက်သွားလို့ပြောတော့မှခါးကြားမှာဓားပါသလိုအထာနဲ့ ငါပြန်လာခဲ့မယ်ဘာညာဆိုပြီး ထွက်သွားတာကြုံဖူးတယ်
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အတ္တမရှိဘဲ တကယ့်လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေ ပေါင်းပြီး လက်ဖြင့်တည်ဆောက်ကြပါ၊ (ဥပမာ) ယခင်က(ပင်လုံစာချုပ်မှလွတ်လပ်ရေး၊လွတ်လပ်ရေးမှပါတီစုံ) ယခု(လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေပေါင်းမှဒီမိုကရေစီ၊ဒီမိုကရေစီမှပါတီစုံ) အားလုံးနည်းနည်းလေးမှားနေသလိုဘဲနော်။
မျိုးချစ်စိက်မှလွဲပြီး ဘာအစွဲမှမရှိပါ၊ တိုင်းပြည်ဦးဆောင်ဖို့ နေရာ လစ်လပ်တယ်ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ယောက်ကိုတော့ လက်တွဲပြီးနေရာပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါသည်၊ သူနှင့်ပါတ်သက်သော နိုင်ငံခြားနည်းပညာ အကူအညီများ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ လါရောက်မှသာလျှင် တိုင်းပြည်လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်ပြောင်းလည်းမည်ဟုထင်မိပါသည်။ (ပြည်ပကိုအားကိုးခြင်းမဟုက်ပါ)
အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ် အမြဲဆန်းစစ်နေတယ်ကွာ၊ တို့ကတာဝန်အရဆိုတဲ့စကား မင်းမိသားစုအတွက်ပါ တိုင်းပြည်အတွက် မဟုက်ပါဘူး ပြန်ဆန်းစစ်ပါအုံးကွာ။ မင်းကောလူသားတွေအတွက် သွားကြားထိုးတံ တန်ဘိုးလောက် လုပ်ပြီးပြီလါး၊ တိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့ ငါကဘာကောင် ဘာရာထူးကွ၊ ငါကပါတီခေါင်းဆောင်ကွ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကွ ဆိုတဲ့ဝေလေလေ စုန်းပြူးတွေဖယ်ရှားပြီး လက်တွဲကြပါ၊ ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဝေးဝေးနေပေးပါ၊ မင်းကတကယ်ဘဲ တာဝန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ်စိက်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် (ရှေ့ကသွားရင်အီးမပေါက်နဲ့ နောက်ကလိုက်ရင် ဖိနပ်မနင်းနဲ့ကွာ အရမ်းစိက်ဆိုးတယ်) ငါတို့နိင်ငံက ကမ္ဘာမှာအရမ်းနောက်ကြနေပြီ အချိန်မရှိပါ။ ငါဒို့ဗိုလ်ချုပ်လည်း ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သခင်လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၊မုဒိန်းကောင်လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်တို့နဲ့ပေါင်းရတာကို နားမလည်တဲ့ မျက်နှာရှုးစုန်းပြူးတွေရဲ့အပြစ်ပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ ငါအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ငါ့ကုမ္မဏီကနိုင်ငံခြားမှာပါ၊ မျိုးချစ်စိက်ရှိရင် မင်းရဲ့လက်လိုပါတယ်။ ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ဖါနိင်ငံ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈) တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင် JJ (CLUB) နားမှာပါနေတယ်………
ဘာသာရေးနဲ့ နိူင်ငံရေး မရောစေနဲ့ ၊ နိူင်ငံရေးဆိုတာ ကိုယ့်အလုပ် လုပ်နေတာလဲနိူင်ငံရေးပါပဲ…..
(၁) ဂေါတမကရှင်းပြတဲ့ အရိယာဆိုက်ကြောင်းတရားက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျင့်ရာနည်းလမ်းသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအရေးအရာဘဲခေါ်ခေါ် နိူုင်ငံရေးဘဲဆိုဆို…အဲ့ဒီကိစ္စက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးပါ။
(၂) အရိယာဆိုက်ကြောင်းလို့ဆိုတဲ့အတွက်၊ သံသရာမှာလည်ကြောင်းကိုမပြပါဘူး။ သံသရာကလွတ်ကြောင်းကိုဘဲ ကျင့်စဉ်မှာဆိုထားပါတယ်။ နိုင်ငံအရေးအရာလို့ခေါ်တဲ့ လူမှုကိစ္စအ၀၀ဟာ သံသရာမှာခြားရဟတ်လိုလည်နေရတဲ့ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
(၃) အရိယာဖြစ်စဉ်ဟာ flawless ဖြစ်ရပါတယ်။ ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အဟာရကို ပရမတ်လို့တိုင်တည်ပြီး၊ စိတ်ကို တစချင်းရှင်းယူပါတယ်။ နိုင်ငံအရေးအရာကိစ္စတွေက flawed process in the social paradigm ပါ။
ဆောင်းပါးရှင်ဆိုခဲ့တဲ့ မြန်မာအပါအ၀င် အခြားဗုဒ္ဓအယူကိုလိုက်နာကြသူနောက်လိုက်များရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလက်ခံပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာအကြောင်းရင်းကတော့ “မိရိုးဖလာ” အစွဲအလမ်းရဲ့ အထိမ်းအကွပ်မဲ့၊ အဆင်ချင်မဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဘဲလို့ မြင်မိပါတယ်။
“”” မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ “”””
ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမအနှစ်သာရတွေဟာ သာမာန်လူတန်းစားတွေအတွက် အလှမ်းဝေးနေဆဲပါ
လူတိုင်းနားလည်နိုင်သောဘာသာစကားနှင့်မှသာ ပိုမိုလက်တွေ့ဆန်ပြီး ပြန့်ပွားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်